Imaam Masaajid oo caawa lagu dhex toogtay masjid ku yaalla Muqdisho - Caasimada Online
Home Warar Imaam Masaajid oo caawa lagu dhex toogtay masjid ku yaalla Muqdisho
Imaam Masaajid oo caawa lagu dhex toogtay masjid ku yaalla Muqdisho
Muqdisho (Caasimada Online) Kooxo hubeysan ayaa caawa salaadii maqrib kaddib waxa ay ku toogteen gudaha masjid ku yaalla degmada Wardhiigleey ee magaalada Muqdisho imaamkii Masjidka.
Goobjooge ku sugnaa masjidka ayaa u sheegay Caasimada Online, in labo nin oo ku hubeysan bastoolado ay gudaha masaajidka ku toogteen imaamkii masjidka isla markaana ay goobta ka baxsadeen.
“Caasimada Online haddii aan idiin sheego sida ay wax u dhaceen, mid ka mid ah imaamyada masjid ku yaalla degmada Warta Nabadda “Ex Wardhiigleey oo lagu magacaabo Sheekh Bashiir Bile ayaa waxaa lagu dhex toogtay gudaha masjidka isagoo wax yer ka hor salaadii maqriba natujiyay, waxaa toogtay labo wiil oo dhallinyaro ahaa kuwaasoo ku hubeysan bastoolado mid ayaa gudaha u soo galay masjidka” ayuu yiri goobjoogaha noo warramay oo diiday in magaciisa aan xigano sababo la xiriira dhinaca ammaanka.
Si kastaba, wuxuu sheegay oo kale goobjoogaha markii la dilay imaamka in dadkii masaajidka joogay ay kala carareen iyagoo naxsan, waxaana xilligaas gudaha masaajidka socday ayuu yiri kutaab la akhrinyay.
Ilaa hadda ma cadda sababta loo dilay imaamkan oo caan ka ah degmada Wardhiigleey ee magaalada Muqdisho.
Dhacdooyinka noocan ma ahan kuwa ku cusub dalka Soomaaliya dhowr jeer oo horre ayaa loo diday culimo iyo aqoonyahano ku jiray Masaajid ama ka soo baxay.